Run Total Quartz : hifampitady ry Yu, John, Jaytaxx sy Vazaha ary Sanjay | NewsMada
Run Total Quartz : hifampitady ry Yu, John, Jaytaxx sy Vazaha ary Sanjay
Hiroso amin’ny dingana faharoa ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara eo amin’ny run fiarakodia. Anisan’ny hifampitady amin’izany ry Yu, John, Jaytaxx sy Vazaha, sns. Hisy fanentanana sy lalao maro ihany koa mandritra ny hetsika.
Raikitra. Tsy hifampitsitsy ireo mpifaninana amin’ny dingana faharoa amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara eo amin’ny run fiarakodia, nampitondraina ny anarana “Run Total Quartz”. Fifaninanana karakarain’ny klioba Ama miaraka amin’ny orinasa Total Madagascar, ny alahady 1 mey izao, eny amin’ny Batac Arivonimamo.
Raha ny fanazavana, hangotraka ary ady goavana ny an’ireo mpifaninana sangany, eo amin’ny sokajy Pro Run, amin’ity dingana faharoa ity. Anisan’ny hiady lohany amin’izany ry Yu mitondra ny Ford Cosworth, izay nahavita ny fe-potoana tsara indrindra, 11’’2, teo amin’ny dingana voalohany. Eny, fa na nisy olana teo amin’ny lafiny mekanika aza izy. Hanarina ny lesoka ihany i John, mitondra ny fiara Smart Drag, izay voatery niala an-daharana, tamin’iny dingana voalohany iny ihany. Ao ihany koa ry Jaytaxx, mitondra ny BMW M3 sy ry Vazaha, mitondra ny VW Cox, sns.
Ankoatra izay, anisan’ny ady goavana ho an’ireo mpifaninana ihany koa ny famonoana na/sy fampidinana ny “record de Madagascar”, izay 10’’1 izany fepotoana tsara indrindra izany, amin’izao fotoana izao.
Etsy andaniny, hisy fanentanana sy lalao maro samihafa kosa ho tazana mandritra ny “Run Total Quartz”. Ahazoana loka maro samihafa ihany koa ireo fisarihana isan-karazany, ka anisan’izany ny fahazoana solika feno Effimax.